बस « Janata Samachar
पार्किङमा राखिएको बसमा आगजनी
दाङ । तुलसीपुरमा एक पार्किङ गरेर राखिएको बसमा आगजनी भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ निवासी सुमन कार्कीको ना ४ ख ७१८८ नम्बरको बसमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो । बस
कैलाली । नेपालबाट भारतको विभिन्न शहरसम्म सिधै संचालन हुँदै आएको बस कोरोना भइरस संक्रमण त्रासको कारण बन्द भएको छ । धनगढीदेखि नयाँ दिल्लीसम्म चल्ने नेपाल–भारत मैत्री बस सेवा बन्द गरिएको
फाइल तस्बिर सर्लाही । बसको ठक्करबाट दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । हरिपुर नगरपालिका–१ जानकीनगरमा ना.१ क ७०४८ नम्बरको बसले आइतबार दिउँसो ठक्कर दिँदा बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो
रौतहट । बसको ठक्करबाट एकजना बालिकाको मृत्यु भएको छ । परोहा नगरपालिका–२, जिगडवा बेलबिछुवामा सोमबार बसको ठक्करबाट ५ वर्षीया बालिकाको ज्यान गएको हो । ना.३ ख १४२८ नम्बरको बसले ठक्कर
छात्राको मृत्युपछि आक्रोशितले गरे बसमा अगजनी (अपडेट)
काठमाडौं । बसको ठक्करबाट घाइते भएकी पशुपति क्याम्पसकी विद्यार्थी सृष्टि पन्तको मृत्यु भएको छ । चावहिलमा बाटो काट्ने क्रममा बसले ठक्कर दिएर घाइते भएकी पन्तको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो
नेपाली सेना चढेको बस दुर्घटना, तीस घाइते
नवलपरासी। नेपाली सेना चढेको बस दुर्घटना हुँदा तीसजना सेना घाइते भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कावासोती नगरपालिका–३ स्थित राजमार्गमा सुर्खेत पृतनादेखि काठमाडौँ छाउनीका लागि छुटेको नेपाली सेना सवार बस शनिबार
बस र माइक्रो जुध्दा माइक्रो खोलामा, १२ घाइते
र्घटनामा घाइते भएका सबैलाई उपचारका लागि काठमाडौँस्थित ट्रमा सेन्टर पठाइएको छ ।
महिलामाथि सिरिञ्ज आक्रमण, देश घाइते
कुनैसमय शहरभरि आइएमविथनिर्मलाका आन्दोलनकारी भेटिन्थे, अचेल तिनीहरु कता छन् ? काभ्रेमा पनि हल्लाका भरमा एकैछिनमा जम्मा भएको त्यत्रो भिडले किन सिरिञ्ज आक्रमण भएनभएको बुझ्न चाहेन ? जमात कसरी समाजमा अराजक